Madaxweynaha: “Waa in sharciga fursad la siiyaa, nidaamka garsoorkana la xushmeeyaa(Sawiro) – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweynaha: “Waa in sharciga fursad la siiyaa, nidaamka garsoorkana la xushmeeyaa(Sawiro)
Madaxweynaha: “Waa in sharciga fursad la siiyaa, nidaamka garsoorkana la xishmeeyaa
Muqdisho, 16 May 2015: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaley magaalada Muqdisho kaga qeybgaley xaflad si weyn loo soo agaasimey oo lagu xusayey sannadguuradii 72-aad ee ka soo wareegtay munaasabadda 15-ka May oo ah markii la aasaasey dhaqdhaqaaqii xornimadoonka ee ay horkacayeen dhalinyaro Soomaali ah.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey xafladda ayaa sheegay dhalinyarada ay udub dhexaad u yihiin hirgelinta qorshaha muhiimka ee horyaalla dalka sida amniga, siyaasadda, iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha.
Waxaa uu si gaar ah uga hadley muhimadda ay leedahay in la dhowro sharciga.
‘’Muhimadda koowaad ee dowladda waa sugidda amniga, si taasi loo gaarana waxaa lagama maarmaan ah inaan dhowrno sharciga. Waxaa mararka qaar dhacda in dad lagu tuhunsan yahay inay Al Shabaab ka tirsan yihiin ama dembiyo kale galeen, ay ka soo daba tagaan dad mas’uuliyiin ah, taasina sax ma ahan. Waa in sharciga fursad la siiyaa, nidaamka garsoorka ee inaga dhexeeyana la xishmeeyaa. Ciidammada, waxaa iyaguna saaran inay sharciga dhowraan oo aaney wax sharciga ka baxsan ku dhaqaaqin, isla markaana ay ogaadaan in isla xisaabtan uu jiro’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxa kale oo uu Madaxweynaha uga digey dhalinyarada inaaney raacin kuwa marin habowsan ee nabadda ka soo horjeeda, isla markaana ay gacan ka geystaan dib u dhiska iyo sugidda amniga dalka.
“Horumarka aan sameyneyno waxaa hortaagan kooxda cadowga ah ee Al Shabaab, dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacaysaa waa dhalinyarada. Waxaa waajib idin ka saaran inaad qeyb ka qaadataan sidii looga hortegi lahaa kooxdaasi iyo fikradaheeda qaldan. Dowladda weli way soo dhoweyneysaa kuwa nabadda wax ku doonaya ee diyaarka u ah inay dagaalka iyo rabshadaha isaga haraan, waana sii wadeynaa mar walba inaan nabad wax ku raadino’’.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in xoogga la saaro wax soo saarka gudaha si loo xaqiijiyo dib u soo kabasho dhaqaale oo sax ah, isla markaana ummadi aaney ku hormari karin in dibedda laga quudiyo”.
Xafladda waxaa kale oo ka soo qeybgaley, khudbadna ka jeediyey Guddoomiyaha Baarlamanka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari, Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka, Maxamed Cumar Carte, iyo mas’uuliyiin ka tirsan labada gole.
Xafladda ka hor Madaxweynaha waxaa uu garoonka Kubadda Cagta ee Banaadir kaga qeybgaley daawashada ciyaar lagu xusayey maalinta dhalinyarada, isagoo halkaasina koob ku guddoonsiiyey Kooxda Jeenyo oo cayaartii halkaasi ka dhacdey uga adkaatey kooxda Elman.
Maraykanka oo kaalmadii Milliteri ka jaray Burundi iyo saamayn ay ku yeelatay Hawlgalka AMISOM.